Jacques RANDRIANASOLO manome baiko ny fitsarana hitandrina tamin'ny raharaha Kidnapping - DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgache Jacques RANDRIANASOLO manome baiko ny fitsarana hitandrina tamin’ny raharaha Kidnapping – DON...
Betsaka moa ny resaka momba ireny magistrat ireny. Izaho efa vao nandray ny asako dia efa niteny hoe io tsy hanavahako an’izan’iza fa na havako na havanao rehefavalan dia kaly. Izy ireny izany efa nomeny teny hoe ireo mpanao kidnapping io surtout ilay Haja io tsy azo avoaboaka fa io no cerveau-ny mpanao kidnapping eto Madagasikara. Ary isika rehetra ngambany nahatsapa fa hatraminy nidirany am-ponja dia ohatrany tsy misy intsony ny kidnapping. Dia zoma sy sabotsy aho tany Toamasina, Praiminisitra alatsinainy, dia samy namatrapatratra izay: tandremo, dia Talata dia navoakany ilay izy. Fivazanana no fiheveranay izany ary rehefa nandalindalina moa izahay dia ohatrany misy ambadika kolikoly ilay izy. Dia normal be ilay izy raha nahantona, manana fahefana hanao izany ny Minisitra ary araka ny andininy faha 60 ao amin’ny Statut de la magistrature moa ary hisy enquête efa misokatra momba an’izany ia hita eo ihany ny tohiny. Zon’ny ny manohitra raha te hanohitra izy fa ny ministeran’ny fitsarana tsy milefitra mihitsy amin’ny zavatra ohatran’izany.
Ankoatran’ny raharaha momba ny fankana ankeriny an’i Armam Kamis tao Toamasina, efa voaroiroy tamin’ny fakana ankeriny iray tao Antsirabe ihany hoe i Hajanirina Dina Manantena. Efa hivoaka ihany koa ny didy fampissamborana indray ity candida lisitra faharoa hilatsaka hofidiana solombavambahoaka amin’ny alalan’ny tsy miankina ity ao Ifanadiana hoy ny loharanombaovao iray.
Article précédentLesona lehibe amin’ny fonctionnaire ny nanagadrana fonctionnaire milaza fa nandray baiko fotsiny – Clément Jaona Filoha SMM – Don dresaka – TV plus du 7 avril 2019
Article suivantTokony nitandrina ireo Mpitasara namotsitra – Imbiky Herimlaza DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR